खेल्ने त विश्वकपको मैदानमै हो - Everest Talk
खेल्ने त विश्वकपको मैदानमै हो1 min read
२०७६, १३ आश्विन सोमबार १७:१६
जब रहरहरुले आकाशको तारा छुने कल्पना गर्छ तब उसले तारा त छुन सक्दैन तापनि तारा कसरी छुन सकिन्छ भनेर एउटा सोचको तहबाट एक खुड्किलो माथि उक्लन सक्छ । सपनाको खेती गर्नेहरु आधा जति सफल भएका व्यक्ति हुन् । यहाँ कति सपना नदेखि भाग्यको भरमा जिन्दगीभर पछुताएर बसेका छन् । त्यसैले केही गर्न नसके पनि सपना चाहिँ देख्ने कोसिस गर्नू । यस्तै सपनाहरुको बजारमा आफ्नो सपना छानिरहेका बेला मूल्यले गोजीको छाती समाएपछि सस्तो सपना खोज्ने क्रममा देखिएको आँखाका कुराहरु आज हामी गर्नेछौँ ।
पानीले चिन्दै आएको वा सगरमाथाले थामेको देशको नाम केही हदसम्म संस्कृतिले पनि जोगाएको छ । संसारमा अरु देश खेलको माध्यमबाट चिनिएका छन् । हामी अझै पनि सतीलाई विकाश नहुनुको जिम्मा दिएर जहाजको ढोका खोल्नमा व्यस्त छौँ । अन्य देशको खेलको स्तम्भ चित्र हेर्ने हो भने प्रगतिको खम्बा धेरै नै माथि छ । हाम्रो देशको खेल स्तम्भले जमिन मात्र छाड्दै छ । सन् २००० लाई र सन् २०१८ लाई एकै मञ्चमा रोखेर हेर्ने हो भने अग्लो र होचो वा मोटो पातलो त खेलको स्तर देखिन्छ नै तर कतिसम्म देखिनु पर्ने हो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ । खेलले सिमाना भन्दैन , देश , जात , धर्म केही पनि भन्दैन खेलले तटस्थ भएर भन्ने भनेको नियम मात्र हो । यही नियमको परिधिभित्र बसेर हाम्रो देशले केही प्रगति गरेको छ । यो सत्य हो । सतय यो मानेमा कि खेलाडीकै होस्टेमा हैँसेले नेपाली खेल जगत केही हदमा माथि उक्लिएको हो । खेलाडीले पाउने सुविधालाई मध्यनजर गरेर खेल जगतलाई विकाश गर्दा सगरमाथा , पानी वा संस्कृतिले मात्र देशको नाम थाम्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
क्रिकेटले अहिले देशलाई डोर्याइरहेको छ । क्रिकेटको क्रेज झन दिनमा दुई गुण रातमा चौ गुणाको रफ्तारमा दौडिएको कुरा त हामी सबैलाई विद्तै छ । पछिल्लो समयमा सन्दीप लामिछानेको प्रगितिबाट अन्य अभिभावक पनि सकारात्मक रहको कुरा प्रतयेक मैदानमा देखिने क्रिकेटका झुण्डहरुले बताएको नै छ ।
क्रिकेटको सपनामा आफ्ना रहरहरु तातो घाममा सौदाबाजी गरिरहेका बालबालिकालाई देख्दा लाग्छ यिनीहरुले देशको नाम पक्कै कुनै बिन्दुमा त पुर्याउँछन तर , तर कुनै गल्लीमा क्रिकेट ब्याट समाएर जोड हिर्काए कुनै घरको सिसाको मूल्य सम्झँदै खेल्नुपर्ने अवस्थामा के उनीहरुको सपनाले भविष्यमा निकास पाउला त ? यो डेस्कमा बसेर यही कुरा लेखिरँदा मेरो दिमागमा सरकार आएको छैन तर आएको छ खेलका संस्थाहरु वा खेल सम्बन्धीका निकायहरू वा अझै भनौ सरकारकै मातहतमा बसेर काम गर्ने अखडाहरुले यी निम्न कुरामा गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ ।
मैदानको अभावमा गल्लीलाई नै मैदान ठानेर आफ्ना रहरहरुसँग प्रेम गरिररहको केटाकेटीले बुझ्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? संविधानको धारामा रहेका बाल अधिकारका कुराहरु ? मैदानकै अभावमा उनीहरुका सपना मर्छ भने खै त ७२ को संविधानले जारी गरेको – धारा ३९ बालबालिकाको हक २) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन, पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तीत्व विकासको हक हुनेछ ।
संविधानको कुनै मैलो पन्नामा हक अधिकार लेखेर मात्र बालबालिकाले कसरी सरकारलाई स्वीकार्न सक्छन् । उनीहरुको लागि भनेर लेखिएको अधिकारको बारेमा नै उनीहरुलाई थाहा छैन ।
बच्चाहरु भन्छन् – हामीलाई मैदानको आवश्यकता छ । यो गल्लीमा यसरी खेल्नु भनेको हात बाँधिदिएर भात खा भने जस्तै हो न राम्रो सँग खान पाइन्छ न अघाइन्छ नै । साथीले बल फ्याल्छ यता ब्याट समाउनेको मनमा डर हुन्छ कतै सिसा पो फुट्ने हो कि कसलाई पो लाग्ने हो कि । उनीहरुको ध्यान बलमा भन्दा धेरै घरका झ्याल र सिसा वा मान्छेको टाउकोमा हुने भएकाले खेलको अभ्यास राम्रोसँग हुन पाउँदैन ।
त्यही समूहका दाङ घर बताउने बिनोद भन्छन् – गत महिना क्रिकेट खेल्ने समयमा एउटा घरको झ्याल फुट्यो । साथीहरु मिलेर धेरै दिनको खाजा खर्च बचाएर उनीहरुले त्यो घरको झ्यालको पैसा तिरेका थिए । यी तमाम उनीहरुका गुनासा हुन् ।
खेललाई झनै नजिक भएर नियाल्ने हो भने फुटबलको स्तरमा क्रिकेटलाई हेपिएकै देखिन्छ तर देशको नाम बोकेर हिड्ने क्रममा क्रिकेट नै छ भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन । सहरमा सुविधा सम्पन्न फुट्सलहरु धमाधम बनिरहेका छन् । बन्दै छन् । बन्ने योजनामा छन् । तर क्रिकेटको लागि भने मैदान नै छैन । अझै गाउँतिर हेर्ने हो भने क्रिकेटको अवस्था एकदमै दयनीय छ । धान काटेर छाडेको खेतमा खेलेका खेलाडीले खेलको बारेमा कसरी सपना देखून् यहाँ आएर प्रश्न उठ्छ सरकार राज्यका नीतिहरूः ञ को उपधारा ५ मा भएको व्यवस्था बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथामिक रूपमा ध्यान दिने । यो कुरा चाहिँ कता लुक्यो ? यही कुरा किन कार्यान्वयन गर्न सकिएन ? यी तमाम अधिकार पाएर पनि बालबालिकाले आकाश देखिने गरि खेल्न नपाउनु कसको कमजोरी हो ? जनता कि बालबालिका ?
सम्बन्धित निकायले गौर गर्ने हो भने नेपाली खेल जगतले आकाशको उडान भर्ने थियो । ती माथि क्रिकेट जगतमा मौसम नै उर्वर भएर आएको छ । यही क्रिकेटको माध्ययमबाट देशलाई सारा संसारले चिनेको छ । वा भनौ चिन्ने क्रममा छ । खेलकुद क्षेत्रले पाएको हण्डरलाई निकायले चुनौती सम्झेर यसलाई अझै सुविधा तथा खेलमा आधुनिकरण थप्नुपर्ने कुरा अति– आवश्यक छ । त्यही गल्लीमा क्रिकेट खेल्ने बालबालिकाको सपना एकदिन विश्वकपको मैदानमा देशको झण्डा अकिंत जर्सी लगाएर दौड्न मन छ । यसको लागि एकोहोरो सपनाले पनि त हुन्न , साथ र सहयोग पनि त चाहियो । त्यही साथ र सहयोगको आसमा रहेका भविष्यका नेपालका स्टारहरुको आँखामा जित्ने साहस छ । त्यो चिन्न हामीले सक्नुपर्छ यदि सकेनौ भने खासै केही कुराको असर त गर्दैन बस् यति हो अहिलेका बालबालिका जवान भएपछि हामी नै विदेशी खेलाडीको खेल हेरेर कोच गरिरहेका हुनेछौँ वा त्यही पुरानो मोडेलको टिभी देखाइएको समाचारमा अहिलेका गल्ली क्रिकेट स्टारहरु विदेश हिँडेको लाम हेर्दै देश सम्झिनेछौँ वा सरकार ।
हरु आज हामी गर्नेछौँ ।
पानीले चिन्दै आएको वा सगरमाथाले थामेको देशको नाम केही हदसम्म संस्कृतिले पनि जोगाएको छ । संसारमा अरु देश खेलको माध्यमबाट चिनिएका छन् । हामी अझै पनि सतीलाई विकाश नहुनुको जिम्मा दिएर जहाजको ढोका खोल्नमा व्यस्त छौँ । अन्य देशको खेलको स्तम्भ चित्र हेर्ने हो भने प्रगतिको खम्बा धेरै नै माथि छ । हाम्रो देशको देल स्तम्भले जमिन मात्र छाड्दै छ । सन् २००० लाई र सन् २०१८ लाई एकै मञ्चमा रोखेर हेर्ने हो भने अग्लो र होचो वा माटो पातलो त खेलको स्तर देखिन्छ नै तर कतिसम्म देखिनु पर्ने हो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ । खेलले सिमाना भन्दैन , देश , जात , धर्म केही पनि भन्दैन खेलले तटस्थ भएर भन्ने भनेको नियम मात्र हो । यही नियमको परिधिभित्र बसेर हाम्रो देशले केही प्रगति गरेको छ । यो सत्य हो । सतय यो मानेमा कि खेलाडीकै होस्टेमा हैँसेले नेपाली खेल जगत केही हदमा माथि उक्लिएको हो । खेलाडीले पाउने सुविधालाई मध्यनजर गरेर खेल जगतलाई विकाश गर्दा सगरमाथा , पानी वा संस्कृतिले मात्र देशको नाम थाम्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
खेललाई झनै नजिक भएर नियाल्ने हो भने फुटबलको स्तरमा क्रिकेटलाई हेपिएकै देखिन्छ तर देशको नाम बोकेर हँिड्ने क्रममा क्रिकेट नै छ भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन । सहरमा सुविधा सम्पन्न फुट्सलहरु धमाधम बनिरहेका छन् । बन्दै छन् । बन्ने योजनामा छन् । तर क्रिकेटको लागि भने मैदान नै छैन । अझै गाउँतिर हेर्ने हो भने क्रिकेटको अवस्था एकदमै दयनीय छ । धान काटेर छाडेको खेतमा खेलेका खेलाडीले खेलको बारेमा कसरी सपना देखून् यहाँ आएर प्रश्न उठ्छ सरकार राज्यका नीतिहरूः ञ को उपधारा ५ मा भएको व्यवस्था बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथामिक रूपमा ध्यान दिने । यो कुरा चाहिँ कता लुक्यो ? यही कुरा किन कार्यान्वयन गर्न सकिएन ? यी तमाम अधिकार पाएर पनि बालबालिकाले आकाश देखिने गरि खेल्न नपाउनु कसको कमजोरी हो ? जनता कि बालबालिका ?
नाहरुको बजारमा आफ्नो सपना छानिरहेका बेला मूल्यले गोजीको छाती समाएपछि सस्तो सपना खोज्ने क्रममा देखिएको आँखाका कुराहरु आज हामी गर्नेछौँ ।
ख झनै नजिक भएर नियाल्ने हो भने फुटबलको स्तरमा क्रिकेटलाई हेपिएकै देखिन्छ तर देशको नाम बोकेर हँिड्ने क्रममा क्रिकेट नै छ भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन । सहरमा सुविधा सम्पन्न फुट्सलहरु धमाधम बनिरहेका छन् । बन्दै छन् । बन्ने योजनामा छन् । तर क्रिकेटको लागि भने मैदान नै छैन । अझै गाउँतिर हेर्ने हो भने क्रिकेटको अवस्था एकदमै दयनीय छ । धान काटेर छाडेको खेतमा खेलेका खेलाडीले खेलको बारेमा कसरी सपना देखून् यहाँ आएर प्रश्न उठ्छ सरकार राज्यका नीतिहरूः ञ को उपधारा ५ मा भएको व्यवस्था बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथामिक रूपमा ध्यान दिने । यो कुरा चाहिँ कता लुक्यो ? यही कुरा किन कार्यान्वयन गर्न सकिएन ? यी तमाम अधिकार पाएर पनि बालबालिकाले आकाश देखिने गरि खेल्न नपाउनु कसको कमजोरी हो ? जनता कि बालबालिका ?
Tags: क्रिकेटक्रिकेट जगतखेल्ने त विशवकपको मैदानमै होनिरज दाहालब्याटविश्वकपसन्दीप लामिछाने